RU Saya – HlaMin
Category: RU Saya
Update : November 30, 2021 In 1950s, many Burmese State Scholars (probably 400+) studied in the USA. Sayas Dr. Freddie Ba Hli, U Sein Hlaing, Dr. Aung Gyi, U Min Wun, U Khin Aung Kyi … attended MIT. Sayas U Ba Toke, U San Tha Aung, … attended […]
Update : October 25, 2021 St. Paul’s High School Brother Austin, Brother Xavier and Miss Hong Kong (Amelia Kyi) taught us English at St. Paul’s High School. Relieving teachers include Saya Lewis and Saya Tims. Intermediate College Daw Tinsa Maw Naing and Daw Khin Kyi Kyi taught English […]
Update : October 22, 2021 by Zayar Oo ဆရာကြီးဒေါက်တာခင်မောင်ညွန့်ဟာယခုအသက် (၉၁) နှစ်ရှိသည့်တိုင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သမိုင်းဌာနမှာ လာရောက်စာသင် ပေးနေဆဲပါ။ ဆရာကြီးဟာ မန္တလေးတက္ကသိုလ်သမိုင်းပါမောက္ခတာဝန်၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ချုပ်တာဝန် တွေထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်လို့ သမိုင်းပညာရှင်အဖြစ်လူသိများပေမယ့် ဆရာကြီးရဲ့ကျောင်းဆရာဘဝ အစဟာရန်ကုန် တက္ကသိုလ် အင်္ဂလိပ်စာဌာနမှာ part-time tutor အဖြစ်စတင်ခဲ့ကြောင်းသိသူနည်းပါလိမ့်မယ်။ ယခုအသက် (၉၁)နှစ်ရှိသည်တိုင်ကျောင်းဆရာဘဝကိုခုံမင်ပြီးစာသင်ရလျှင်ပျော်နေတတ်သော ဆရာကြီးကိုမြင်ရတော့ လွန်ခဲ့သော (၆၇) နှစ်၊ ဆရာကြီးဘွဲ့ရပြီးစအချိန်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန တတိယအတွင်းဝန်လုပ်ဖို့ကြိုးစားရင်း ကံဇာတ် ဆရာက သင့်တော်မည့် လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ဆရာကြီးအားတင်ပေးခဲ့သဖြင့် ယနေ့တိုင်ကျောင်းဆရာအဖြစ်ပျော်ရွှင်စွာ လျှောက်လမ်းနေ ပုံများကို ပြန်လည်စဥ်းစားမိ တော့ အတိတ်ကအဖြစ်အပျက်တွေ ဟာကျွန်တော့်စိတ်အာရုံမှာရုပ်ရှင်တစ် ကားကြည့်သလိုမြင်ယောင်လာမိပါတယ်။ ဆရာကြီးဒေါက်တာခင်မောင်ညွန့်ဟာ […]
Update : October 18, 2021 During our younger days, three sayas — Dr. Hla Shwe (Boon Chiong, First in Burma in 1953 from Yegyaw Methodist), Dr. Tin Maung and Dr. Tin Aung — came back after completing their doctorate in Physics from the USA. Dr. Hla Shwe and […]
Update : October 15, 2021 Taught at the Institute of Education. Translated the verse of Hna yauk hte nay gin de precisely while invigilating. Patron of “Rangoon University Ah Nu Pyinnya Ah Thin“ Saya Dr. Maung Maung Kha used to accompany U Ba Kyi’s vocals of with his […]